Ukunikeza Ukukhetha - Zhejiang Estar Mechanical Co., Ltd
Ayisithupha amaphuzu ahlobene nithela ukuphila:
(1) Layisha P [N / mm2] Layisha
I emikhulu umthwalo, omfushane impilo inkonzo eziveza; aba maningi ukuguquguquka umthwalo, aba maningi nomthelela ekuphileni ukuzala, omfushane impilo eziveza; Kunoma yikuphi, umthwalo esiphezulu ayikwazi ukudlula theory esiphezulu umthwalo ovumelekile. usayizi Layisha uyalingana nokuyothatha umthwalo ehlukaniswa endaweni esivezwa we ukuzala, ifomula kuba P = F / (D * B).
(2) Speed ​​V [m / s] futhi PV Inani
Ukunikeza yokuphila ixhomeke endleleni ukubaluleka PV ubukhulu, okungukuthi, langempela umthwalo P [N / mm2] futhi elislayidayo Isivinini V [m / s] umkhiqizo, i-PV ukubaluleka lincane, isikhathi eside ekuphileni esindayo.
(3) lokushisa T [ama minithi awu]
Ukunikeza ukuphila kubuye sincike lokushisa eziveza lapho lusetshenziswa, ngakho okukhethiwe design kufanele ucabangele yezingxenye ezifanele izici indlu.
(4) i-maholoholo kobuso izingxenye bafake
Maholoholo we ebusweni ukuxhumana zithinte izingxenye ukugaya kumele abe phakathi Ra0.2 ~ Ra0.8, sithwele inhlangano kanye nokusebenzisa inqubo asikwazi ukuba umonakalo abezindaba abukhali ukuze sihlobene ebusweni.
(5) indaba kobuso izingxenye ukugaya, le maholoholo kobuso izingxenye ukugaya kuyisici ezithinta impilo inkonzo bushings, ngaphansi kwezimo ezivamile endaweni edingekayo ≤ 0.4μm ka.
(6) nezinye izinto ezifana eziveza isihlalo design, izimo Lubrication.